Mareykanka ayaa isku xilsaaray Soomaaliya kadib qaraarkii baarlamaanka - Axadle – Axadle
Mareykanka ayaa isku xilsaaray Soomaaliya kadib qaraarkii baarlamaanka – Axadle
Washington (Axadle) – Mareykanku wuu soo dhoweeyey go’aanka Barlamaanka waxaana dowlada Madaxweyne Maxamed Looga wareejisay xilka kadibna dib ugu noqotey heshiiskii Sebtember 17, iyagoo balan qaadey in ay ka caawin doonaan dalka in ay ka dhacdo doorashooyinka gaysaneyso.
“Waxaan bogaadineynaa dhawaaqii Madaxweynaha ee ahaa in Ra’iisul Wasaare Rooble uu hogaamin doono dadaalada Dowlada Federaalka ee ku aadan dhameystirka heshiiska iyo la socodka howlaha hanaanka doorashooyinka, oo ay ku jiraan arrimaha amniga,” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda. Mareykanka
Wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka waxay ugu baaqday dhammaan dhinacyada heshiiska ku jira inay sida ugu dhaqsaha badan u kulmaan shuruudo la’aan si loo dhameystiro howlaha doorashada loona bilaabo dhaqan gelintiisa qaab furfuran iyo iskaashi
“Mareykanka wuxuu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto qabashada doorashadan sida ugu dhaqsiyaha badan,” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay soo jeedin ka timid Madaxweynaha xilka ka sii degaya Maxamed C / llaahi Farmaajo oo ahaa in la laalo heshiiskii doorashada ee 17-kii September.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka codsaday xildhibaanada inay u codeeyaan codsiga Madaxweynaha. Codsiga madaxweynaha waxaa aqbalay guud ahaan 140 xildhibaan oo kaqeyb qaatay, sida uu sheegay Mursal.
Qatar and Turkey are “interfering” in Somalia’s political disaster
the alleged perpetrator of the coup try in